Umzuzu wafika: #GeospatialByDefault; ujoyine i-GWF 2019 e-Amsterdam-Geofumadas
Umzuzu wafika: #GeospatialByDefault; ujoyine i-GWF 2019 e-Amsterdam
I-2019 Geospatial World Forum ikulindeleke ukuba ibe yona nto ikhulunywe ngayo ngomcimbi we-geospatial wonyaka Abathunywa be-1,000 +, abalawuli be-200 + abaphathi kunye namagosa karhulumente amakhulu Amazwe e-75 + bekhona.
Ngamafutshane, ngumcimbi wehlabathi jikelele kwiindawo zegosati, kunye nomxholo #GeospatialByDefault: Ukunika amandla amabhiliyoni, ivula ezintlanu iintsuku. Esi siganeko sihlelwe ukuba senzeke e-Amsterdam, kwi-Taets Art & Event Park, ukusuka kwi-2 ukuya kwi-4 ngo-Ephreli ka-2019.
Abalawuli abalawuli be-200 + kunye namagosa karhulumente amakhulu akhoyo
I-CEO zeemveliso eziphambili kwi-shishini, kuquka iHexagon, u-Esri kunye neTrmble, iya kubhekisana nabaphulaphuli kwiinkomfa, ukubonelela ngolwazi ngokuguquguquka kwezinto zeteknoloji, iintlobo zoshishino ezintsha kunye nokwabelana ngendlela i Geospatial ibe ngayo yinxalenye yoshishino zonke. kunye kubomi bethu bemihla ngemihla.
IECO eziPhambili / iinkokheli zoshishino ziquka:
UJack Dangermond, uMongameli uEsri
U-Ola Rollen, uMongameli kunye ne-CEO yeHexagon
Steve Berglund, uMongameli kunye ne-CEO ye-Trimble
UJeff Glueck, i-CEO ye-FourSquare
Javier de la Torre, umsunguli kunye ne-CSO, iCARTO.
UBrian O'Toole, i-CEO, i-Blacksky
UFrank Pauli, i-CEO yeCycloMedia
Ukongeza, iintloko arhente ezininzi geospatial yesizwe, esigqeba C-level kwimibutho eziphambili kunye namagosa aphezulu evela kwii-arhente zamazwe afana yeZizwe eziManyeneyo kunye neBhanki yeHlabathi baye baqinisekisa phambi kwabo.
Iinkqubo zijoliswe kumsebenzisi, zihlanganisa lonke uluhlu lwe-ajenda yokuphuhliswa kwehlabathi
Olunesihloko imizi ezikrelekrele, ukwakhiwa kunye nobunjineli, iinjongo zophuhliso oluzinzileyo, okusingqongileyo kunye uhlalutyo indawo zobuntlola boshishino, ngaphezu kwama 60% abasebenzisi isiphelo iya kuba liqonga ngotshintshiselwano incoko kunye nokwabelana ngezona ndlela zingcono geographies ezahlukeneyo.
Ababukeli beeprofayili eziphezulu baquka:
UMlawuli weeNkqubo zeCadasta Foundation
Umlawuli weDiari yeSixeko saseAthene
Umlawuli wokuzinza kwesixeko saseSydney
INtloko ye-Ofisi yeeNkqubo zokuQinisekisa kwi-European Space Agency
Umphathi weSizwe samahlathi kunye nokuLawula ukungcola kwi-INTERPOL
Iintloko zeGeospatial Solutions kwiMinich Re
Umsunguli kunye ne-CEO ye-Radiant Earth Foundation
Umlawuli wehlabathi jikelele - Ubunjineli beDijithali kunye nokuzenzekelayo kwiRoyal HaskoningDHV
UMlawuli oyiNtloko weGunya loMhlaba waseSingapore
IGosa leNgcaciso yeGosa leeNgcaciso zeNdalo yoLuntu
Ummeli wezulu weDutch
Ubuchwephesha bokukhawulela ekuboniseni.
Kuka 1.000 square metres, kunye nababonisi 45 kwiinkampani ezinkulu geospatial, ii-arhente zikarhulumente kunye nemibutho yoshishino, kulo mboniso baya kuba liqonga elisemagqabini ezenzeka ngoku kwiimveliso, izisombululo kunye nezenzo geospatial ehlabathini lonke. iimpawu ezintsha ukuba kubuzwa ziinkalo for SME kanye uqale, le nkundla SDG kunye ski nobuchwepheshe AI, IoT kunye Big Data ukuba yenziwe emininzi bumi. Hlola uluhlu lwe mboniso apha.
Iinkqubo zengingqi kunye neziganeko zentlalo ekudaleni amanethiwekhi.
Iiphaneli ezinikezelweyo ezixubusha iziseko ze-geospatial, ezopolitiko kunye nezakhono zoshishino kwimimandla ye Asia, iArabhu, i-Afrika neLatin America zicwangciselwe ngemini ye-3 ngo-Ephreli. Ummandla ngamnye uya kuba nokwamkelwa kwawo kunye nokutya ngeemfuno zengingqi ezisebenzayo, ezigqibeleleyo kumanethiwekhi oshishino.
Iziganeko ezininzi zoluntu ziye zacwangciswa kubandakanywa ukufumana umboniso, ubusuku benkcubeko kunye nokufumana amaqabane ukubonelela ngamathuba okuthunywa kunye nokuxhuma.
Ukusetyenziswa kweziganeko ngolwazi oluncedo
Kukhona isicelo esisebenzayo seselula esitholakalayo kubafundi beenkomfa ukucwangcisa ikhalenda yomcimbi kwangaphambili. Isicelo senza ukuba abahamba phambili baphendule i-ajenda, badibana nezithethi kwaye baqhagamshelane nabanye abathathi-nxaxheba. Isicelo sifumaneka kwi-App Store kunye ne-Google Play Store, phantsi kwegama elithi 'Imicimbi yeMedia yeGeospatial'
Kwimibuzo eyongeziweyo: USarah Hisham, umphathi weprogram, iindaba zeendaba ze-geospatial kunye noqhagamshelwano Sarah@geospatialmedia.net
Post edlulileyo«Edlulileyo I-AEC elandelayo kunye ne-SPAR 3D Inkqubo yeNkomfa ye-2019
Post Next Iimagazini ze-Geomatics - I-40 ephezulu-iminyaka eyi-5 kamvaOkulandelayo "